क. पुर्ण, हामी तपाईंलाई सम्झिरहेछौँ - Left Review Online
सन्दर्भः क. पुर्ण पौडेल बेपत्ता भएको दिन
२०७७ बैशाख १३ गते अखिल (क्रान्तिकारी) का तत्कालीन केन्द्रीय महासचिव, हामी सबैको प्यारो मान्छे पुर्ण पौडेल (क. विश्वास) लाई राज्यले बेपत्ता बनाएको पनि १८ वर्ष पुगेको छ ।
२०७७ बैशाख १३ गते अखिल (क्रान्तिकारी) का तत्कालीन केन्द्रीय महासचिव, हामी सबैको प्यारो मान्छे पुर्ण पौडेल (क. विश्वास) लाई राज्यले बेपत्ता बनाएको पनि १८ वर्ष पुगेको छ । “कि लास कि सास देखाऊ” भनेर बेपत्ता योद्धाका परिवारले आन्दोलन गरेको पनि लामो भइसक्यो ।
आमा मोतीमाया लगायत परिवारको छोरा आउने आसमा वर्षौँ बितिसकेको छ । विछोडको जलन कस्तो हुन्छ? जल्नेहरुलाई थाहा हुने रहेछ । हजारौँ आमाहरुको आँखा अहिले पनि ओभाना छैनन् ।
तपाईं लगायत सम्पूर्ण शहीद र बेपत्ता योद्धाहरुको सपना अधुरै छन् । वैचारिक स्खलन यति डरलाग्दो विषय रहेछ कि जुन त्याग, समर्पण र बलिदानले आज उनीहरु यो स्थानमा छन्, उनीहरुले नै यो मुद्दालाई ओझेल र बद्नाम बनाइरहेका छन् ।
शहीद, बेपत्ता र घाइते योद्धाको सम्मान राज्यले दिनु त कता हो कता आफ्नै पार्टीको साझा मुद्दा बनाउन नसक्ने गरी बलिदानको मूल्यलाई रछ्यानमा मिल्काइदिँदा रहेछन् ।
सर्वहारावर्गका नेता दलाल पुँजीवादसँग आत्मसमर्पण गरेर श्रमजीवी वर्गलाई नै कसरी लात हान्दोरहेछ भन्ने भद्दा नमूना नेपालमा हामीले भोगिरहेका छौँ । बलिदानको मूल्यलाई आँशु र भावनामा मात्र होइन सोच, चिन्तन र विचारमा खोजिनुपर्छ । प्रतिक्रान्तिको जवाफ आँशुले होइन, क्रान्तिले दिनेगरी सोच्नुपर्छ ।
क. पुर्ण पौडेल, आफ्नी जीवन संगिनी क. सावित्रा दुरासँग
कोरोना महामारीले देश लकडाउनमा छ । महाविपत्ती र मानवीय संकटको बेला पनि लुट्ने दलाल व्यवस्थाको विश्वव्यापी चरित्र हो । यसले अरुको घर भत्काएर आफ्नो महल ठड्याउन खोज्छ । जुन अहिले पल-पलमा देखिएको छ । तीन करोड जनतालाई भित्र राखेर आफू लुट्न बाहिर बस्छ । न्यायको आवाजलाई बन्दुकले दबाउँछ । जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि लगाएको प्रतिबन्धले सहजै बुझ्न सकिन्छ ।
यस्तो संकटमा बन्दीहरुलाई छाड्नुपर्नेमा विरामी कमरेडहरुलाई पनि गिरफ्तार गर्न छाडेको छैन । यो सरकारसँग थोरै मानवीय समवेदना पनि छैन । दमनले न्यायको आन्दोलन कमजोर हुँदैन भन्ने इतिहास हाम्रो साक्षी छ। दमनले कमजोर हुने होइन, सुदृढ र मजबुत हुँदै जानुपर्छ । नेतृत्वले बिचैमा धोखा दियो भनेर निरास होइन, हाम्रा आफन्तले छाडेर गएको हाम्रो मुक्तिको झण्डालाई माथि उठाउने पार्टी र विचारलाई साथ दिन सक्नुपर्छ ।
पुर्ण, तपाईंको जीवन साथी हुनुमा मलाई गर्व छ । तपाईँसँगको सहकार्य लामो हुन सकेन । जति भयो अमीट रह्यो । तपाईँको दृढता, कला, क्षमता, साहस, त्याग, समर्पण र बलिदानको अमूल्य योगदानको अगाडि पार्टी र जनताप्रति मैले गरेको योगदान फिक्का नै छ । तर पनि तपाईँजस्तो महान बन्ने बाटोमा निरन्तर लागिरहेको छु । हरेक दुःख र अफ्ठ्यारोमा तपाईँलाई सम्झिरहन्छु ।
तपाईँ लगायत हजारौँ योद्धाहरुले देखेको सपना पूरा गर्न अफ्ठ्यारो तर सम्भव बाटोमा लागिरहेको छु । तपाईं हाम्रो भौतिक भेट के हुन्छ? तर विचार र भावनामा सँधै तपाईँको साथमा छु र रहनेछु । हामी तपाईँलाई सँधै सम्झिरहेछौँ, पुर्ण ।
(लेखक बेपत्ता योद्धा क. पुर्ण पौडेल (विश्वास) का जीवन संगिनी हुनुहुन्छ ।)
पछिल्लाे - सम्झनामा क. पुर्ण पौडेल
अघिल्लाे - संसदीय व्यवस्था खतम गरौँ, नयाँ व्यवस्था जन्माऔँ